मलेसिया बाट आयो दु:खद खबर, मलेशियामा नेपाली कामदार बोकेको गाडी दुर्घ’टना; एक नेपालीको ज्यान गयो तिन गम्भीर घाईते – Sandesh Press
June 3, 2021 391
जेठ १९- मलेशियामा नेपाली कामदार बोकेको सवारी दुर्घट’नामा परेको छ ! दुर्घटनामा परि एक नेपालीले ज्यान गुमाएका छन् भने अन्य केहि घाईते भएका छन्,
घाईते मध्ये तिन नेपालीको अवस्था ग’म्भीर रहेको मलेशियन संचारमाध्यमले खबर लेखेका छन् ! मलेशियाको जोहोरबारु भन्ने ठाउँमा घटना घटेको हो!नेपाली सुर’क्षागार्डहरुलाई लिएर गईरहेको गाडीले अचानक नियन्त्रण गुमाउँदा दु’र्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ ! घटनामा अन्य पांच जना नेपाली सामान्य घाईते भएका छन् ! सबै घाईतेहरुको सुल्तानाहा अमिनाहा अस्पतालमा उपाचार भईरहेको छ ।****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला
Nextपैसामा बिकेको अस्पतालले २१ दिने शिशुको ज्यानको प्रवाह समेत नगर्दा यस्तो अवस्था !
भरतपुर मतगणना अपडेट : ६ हजार १७७ मत गन्दा रेणु र विजयले कति ल्याए मत ?